समाजिक संजालबाट ब्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने नेपाली समाजमा नौलो होइनन । कुनै पनि ब्यक्ती विशेष हो या राजनीतिको ? यसै समाजिक संजालबाट नै भाइरल हुने गर्दछ - MONGOL KHABAR
समाजिक संजालबाट ब्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने नेपाली समाजमा नौलो होइनन । कुनै पनि ब्यक्ती विशेष हो या राजनीतिको ? यसै समाजिक संजालबाट नै भाइरल हुने गर्दछ
काठमाडौ । माघ १, हाम्रो समाजको अगाडि समाजिक संजालबाट ब्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने नेपाली समाजमा नौलो होइनन । कुनै पनि ब्यक्ती विशेष हो या राजनीतिको ? यसै समाजिक संजालबाट नै भाइरल हुने गर्दछ । हाम्रो समाजमा प्रन्तु नराम्रो कुरालाई नै धेरै प्रमोड गरिरहेको छ ।
यो निकै दुखद कुरा हो । कति कुराहरु समाजिक संजालमा भाइरल भए ,गरेको जस्तो नभएको प्रमाण हामी माझ छर्लङ छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो समाजमा हिजो आज सहि मंगोल दर्शन र मंगोलवादमा दिन रात नभने लाग्ने केही नेता माथी पनि आइरहेको छ । कसैले ब्यक्तिगत त कसैले संगठानिक हिसाबमा सिङ्गो संगठनलाई नक्कलीको आरोप लगाइरहेको छ ।
यसलाई आम मंगोल जनताले सहि सिद्धान्त के हो बुझ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । तर हामी त्यसको खंडन गर्ने भन्दा पनि विधि, बिधान, र सहि सिद्धान्त र सिद्धान्तनिष्ठ भएर मार्गदर्शनलाई प्रथामिकताको साथ लिएर डा.गोपाल गुरुङको अमुल्य सिद्धान्तलाई लिएर देश तथा बिदेशमा प्रशिक्षण र प्रचारप्रसारको लागि अगाडि लम्किरहेका छौ ।
हामी ब्यक्तिगत आरोप र बिरोधमा होइन । सहि सिद्धान्तको उल्टो अर्थ लगाएर हामी विरुद्ध लगाएको आरोप र चरित्र हत्यालाई खण्डन गर्दैनौं । तर हामी यसको पनि बिरोध गर्ने गर्दैनौं । बाध्यताबस एक दुई शब्द आम मंगोल जनतामा संगठन माथी लगाइएको आरोप र भ्रमलाई ८० प्रतिशत मंगोल समुदायलाई प्रष्ट पार्न खोजिएका हो । कुरा गत स्थानीय चुनाब देखि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाब अघि देखि नै मंगोल समाजमा आएको भुकम्पको हो ।
एकाइसौं शताब्दीमा मंगोल मुक्तिको अवाजलाई राष्ट्रब्यापी रुपमा प्रचारप्रसार र संगठन निर्माणको अभियानमा लागेका संयौं मंगोल नेता कार्यकर्ताको एउटै अवाज थियो, मंगोल एक हौँ । तर MNO मा अबसरबादी लम्पसारबादीले संगठनलाई धवस्त बनाई दियो । नेपालमा सन 1495 देखि नेपालमा शरणार्थीको रुपमा प्रबेश गरि हामी माथी लगाइएको बर्णभेती नितिनियम र ब्रह्माण्डबादको जरै बाट उखाली फ्याक्ने हाम्रो अभियान जारी छ ।
बिडम्बना हामिले मंगोल जनतालाई दुखको साथ भन्नू पर्छ । तर हामी मंगोल पिता डा.गोपाल गुरुङको सिद्धान्तमा संगठनको नेतृत्व पंतिको सानू गल्तिले आज मलाई लाग्छ दशौं बर्ष पछाडी ढकलिएको छ । तथापी हामी बिचली छैनौं । तत्कालिन MNO मा रहदा संगठनको प्रमुखले गरेको गल्तीलाई आत्मालोचना गर्दा,संगठनको बिधान बिपरित नेतृत्वले गल्ती गर्दा बिरोध होइन, सच्याउन आग्रह गर्दा सत्य र सिद्धान्तको कुरा नसुन्दा आज संगठन दुईधार हुनु स्वभाबिक हो ।
इतिहासको काल खण्डलाई हेर्दा र बुझ्दा बुद्धलाल मेचेले नेतृत्व गर्ने मंगोल संगठनले हामी ८०% मंगोललाई मुक्तिको लागि होइन । पतनको बाटोमा लागेको निस्कर्शमा पुगौं । यो संगठन ठूलो बाहुनबादको षड्यन्त्रमा फसिसकेको छ । लोकतन्त्र स्विकारको नाममा बाहुनछेत्री हुलेको प्रष्ट प्रमाण बाहिर आइसकेको छ ।
त्यसैले हामी आह्वानको साथ अपिल गर्दछ कि,आम नेपाली मंगोल मुक्तिको लागि एक मात्र महान संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन-डा.गोपाल गुरुङ संगठनमा तन मन धनले साथ सहयोग गरि हाम्रो संगठनलाई साथ दिन आम ८०% मंगोल मुलबासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।